I-Chakra ISO Netinstall Ikhishwe Ukuhlolwa | Kusuka kuLinux
I-Chakra ISO Netinstall ikhishwe ukuze ihlolwe
I-Rayonant | | Ukusatshalaliswa, I-GNU / Linux, Izaziso
Ukuthuthukiswa kwe- Chakra ayimi, futhi kanjalo ayimi Tribe, isifaki sakho. Ngemuva komsebenzi omkhulu wokulungiselela konke ukukhishwa kwe-ISO «Benz»Ngokuhlonipha unjiniyela waseJalimane obekuqukethwe I-KDE 4.10 SC, manje sekwenziwe okuthile obekucelwe isikhathi eside, namhlanje kukhishwe i-ISO ukwenza i-Chakra netinstall, engiyithola ngokusebenzisa kwakhe Isiza esisemthethweni .
Kodwa-ke, njengoba kuyinguquko ebalulekile endaweni yokufaka futhi noma ngabe onjiniyela benze izivivinyo zabo, wonke umuntu ucelwa usizo lokuthola amaphutha ku-ISO entsha, ngakho-ke ukusetshenziswa kwayo akunconyelwe amaqembu okukhiqiza. Kunconywa futhi ukuthi ulandele izincomo ze- wiki izivivinyo.
Kunezindlela ezimbili zokusebenzisa i-netinstall, ngemidiya yokufaka entsha evela lapha:
Noma kungenziwa kusuka ku-ISO yamanje «Benz«, Kepha ukufaka owokugcina Tribe kumodi ebukhoma enjengale:
$ sudo pacman -U http://chakra-project.org/repo/testing/x86_64/tribe-2013.02.17-1-x86_64.pkg.tar.xz
Kancane Chakra Ihlanganisa indawo yayo, hhayi kuphela ngokulinganisa izici, kepha nangokuhlinzeka ngamathuluzi amasha njengoba kwenzekile nethuluzi lokuhlela izinhlelo I-GTK isetshenziswe ku Chakra manje okuyingxenye ye- I-KDE 4.10.
Ngaphandle kokungabaza, ikusasa eliqhakazile lisemnyango kulokhu kusatshalaliswa, okuzothatha okukhulu lapho ekugcineni kukhishwa. Akabei futhi ingazimela ngokuphelele ku pacman (yize inguqulo ye-Arch ingasasekelwa njengoba kukhona umehluko omkhulu).
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-Chakra ISO Netinstall ikhishwe ukuze ihlolwe
Kuyi-distro enhle, senginayo amasonto, futhi iqiniso ukuthi ngikhululeke kakhulu ngayo, kangangoba bengingumsebenzisi we-Gtk futhi manje ku-kde ngizizwa ngikhululeke kakhulu.
Izindaba ezinhle kepha angicabangi ukuthi ngiyazisebenzisa ngoba angizimisele ngokushintsha i-chakra xD yami
Imithetho ye-Chakra !!! Sengibe noChakra cishe iminyaka emibili manje, futhi kuba ngcono nsuku zonke. isibuyekezo sakamuva, esiholwa yiDharma neCaledonia, sibukeka futhi sisebenza kahle. Ekuqaleni, inkinga yokungabi bikho kwezicelo ze-GTK neGnome kwakubonakala kuyinkinga enkulu kimi, kepha lokho kwasala ngemuva, sibonga izinyanda. Ngaphandle kwalokho, angikucabangi ukuthuthela kwenye indawo: I-Amarok ibonakala ingenakubuyiselwa.
Ngibe noChakra unyaka wonke futhi ngiyaqinisekisa ukuthi iyathuthuka ngokuqhubekayo futhi ngiyayithanda i-amarok kepha ngiyishintshe ngo-clementine kudala 😀
Angikwazanga ukujwayela uClementine, hhayi ngoba engumdlali omubi.
Okuhlekisayo, kwenzeka ngenye indlela kimi, angikaze ngijwayele i-Amarok. ngakho-ke ngisebenzisa uClementine kuzo zombili iXubuntu neChakra.
Kuyiqiniso, ngingumlandeli we-Amarok kodwa esikhathini esithile esidlule ngamfaka uClementine esikhundleni sakhe; I-Amarok ilandela isimo sokungacabangi kwama-devs ayo lapho ngokuyisisekelo noma isiphi isici esihlongozwayo singabalulekile noma siyisiphukuphuku - bona izinkundla - futhi kubukeka sengathi yenziwa ukuba ihlanzeke ngokuphelele_ kubasebenzisi be-novice.
UClementine esikhundleni salokho ubukeka njengomdlali owenziwe ngumphakathi wabaduni be-KDE womphakathi wabaduni be-KDE, unezinketho eziningi ezinhle, ilula futhi iyashesha kune-Amarok futhi isebenza kahle!
Nsuku zonke zingcono futhi zinamathuluzi amaningi.
Kuhle kakhulu kuChakra
Kubonakala kimi ukusatshalaliswa okuhle kakhulu, (sengivele ngakuzama lapho bekukhona ama-32 futhi muva nje angama-64) okuhluleka ukungilungisa yinkinga yezicelo ezikwi-GTK ezixazululwa (iningi kakhulu) ngezixha; kepha kukhona ezinye izinhlelo zokusebenza ezingekho ezinqolobaneni futhi esikhundleni salokho zoKubuntu, Mint kanye neNetrunner uma zitholakala futhi ngakolunye uhlangothi angitholanga ibhukwana elihle ngeSpanishi elingifundisa ukusebenzisa i-terminal nemiyalo yalo, ngoba ngingu ngijwayele "ukuthola kahle ... njll ..." ukuthi ngibe nesikhathi esinzima ukuqonda i-pacman.
Ngokwami ​​ngifuna ukuyisebenzisa kukhompuyutha yami ephathekayo ye-Samsung RV408 FreeDOS, kepha lezo zinto ezincane engiziphawulayo (amathuluzi esamsung; i-freefilesync; neMenenja ye-PPA; uSeamonkey) azange zingivumele ngilahle i-Kubuntu 12.10, uma othile engisiza ... ngizoba omunye umsebenzisi we-Chakra .
Ngiyacacisa ukuthi angihlanganisi, ulwazi lwami kuLinux ngiluthole online futhi ubungcweti bami bungumuthi; Kepha iLinux iyinto yami yokuzilibazisa nezinhlelo zezokwelapha engizisebenzise kuWindows bengivele ngizihlalisa cishe zonke kuLinux nalezo engingazisebenzisanga, ngoba ngeVirtualBox ngiyazisebenzisa ngize ngithole indlela yokuba nazo zeLinux.
Ghermain, uma ufuna ngempela ukuzama i-Chakra ngiyakutshela ukuthi, ezinhlelweni ozibalulayo, amathuluzi we-samsung ne-freefilesync asekhosombeni leCCR, ngenkathi uSeamonkey eku-AUR futhi ungazama ukufaka itheku lapho belungisa ukungcola kwe-hack (CCR manje uqobo aluvumeli ukungeza amaphakheji amasha). Futhi iMenenja ye-PPA ayiyona eye-Arch, wuhlelo oluthile lwama-distros asebenzisa ama-PPAs afana no-Ubuntu nokunye kwawo.
Mayelana nokusetshenziswa kwe-pacman, ngikholelwa ngokuqinile ukuthi ayikho incwajana engcono kunaleyo eku-Arch wiki:
Kunoma ikuphi, njengoba sesivele siphawule kaningi kubhulogi, akuwona wonke ama-distros enzelwe bonke abasebenzisi noma wonke amaqembu. Kuyindaba yokuzama nokukhetha. Ngalokhu ngiqonde ukuthi uma udinga amathuluzi athile futhi uwafaka ku-Chakra kufanele wenze impilo yakho ibe nzima, ngoba akunangqondo ukusebenzisa le distro enezinketho eziningi ezinhle kakhulu ezitholakalayo, njengoba wazi. Halala!
Ngizolinda izinyanga ezimbalwa okufanele ngizihambele phesheya futhi lapho (okushibhile kakhulu) Ngithenga i-HD ngomthamo omkhulu kunalokhu enginakho manje bese ngishiya ukusabalalisa engikusebenzisayo njenge-primary (Kubuntu 12.10) futhi Ngifaka njengeChakra yesibili ezohlolwa futhi uma ngikwazi ukuba ngumngane wakhe bese ngiyishiya njengeyona eyinhloko, futhi ngiyabonga ngesixhumanisi se-pacman, ngizoyifunda.
I-Tribe ihlukumeza, isifaki sokuqhafaza esibi kunazo zonke se-GNU + Linux.
Izigqoko eziya ku-Ubiquity, isifaki Ubuntu, kuyamangalisa nje: Bengisebenzisa amakhompyutha kusukela esikhathini se-8-bit kanti isifaki se-Ubuntu yisifaki sokuqala sohlelo lokusebenza oluphelele ngokuyisisekelo.
Akukubi kangako kimi, kubonakala kuqondakala impela futhi kuyasebenziseka, kepha kusobala ukuthi kunezinto eziningi okufanele zenziwe ngcono njengokusekelwa kwe-LVM nezinye.
Bheka ukuthi u-ami nguyena engimthanda kakhulu futhi ukuphela kwakhe onganginikanga izinkinga problems
Lokho vaaaaa, Tribe muhle kakhulu, ukuphela kwento ayinayo ukwahlukanisa, kepha kokunye, ngikubona kulula kakhulu futhi kuyaqondakala.
IPandev isebenzisa iMenenja yokuhlukanisa i-KDE DE
Ngalesi sizathu, ayinayo, isebenzisa uhlelo lwangaphandle, oluthi, ngendlela embi kakhulu.
Yebo, sihalalisela ngobuqotho kubo bonke labo abasebenzisa i-chakra, kepha konke okwenziwa yi-chakra kubonakala kungumbono omubi, angizange ngikuqaphele kuze kube yilapho umdali we-compix ephawula, labo abasebenzisa i-linux futhi bayayithanda bacabanga ukuthi enye yezinzuzo zayo ukwahlukana kepha bekungeke kube ngcono yini ukuthi bonke basebenze entweni efanayo baphonse konke into eyodwa ngasikhathi sinye esikhundleni sezinto ezifanayo ezingama-20? Labo abenzela iChakra lezi zindaba nazo zonke izinguquko ze-KDE, kungani bengenzi amaphakheji bese bewafaka ku-AUR? Ngokunjalo, abantu abaningi bazosebenzisana, abantu abaningi bangazama ... njll, njll. Mina ngokwesibonelo ngifuna ukugqoka iDharma kepha angazi noma ngizoyithola nge-AUR noma kuzofanele ngizihluphe, ngicabanga ukuthi ngizoba kodwa ngoba othile uzobe eyithathe kuChakra futhi uzobe elethe i-Arch futhi ekugcineni kunezindawo ezi-2 lapho kufanele asebenze futhi azinakekele ... ngicabanga ukuthi lokhu kufanele kube elinye iphuzu lokuthuthuka ku-Linux
1. I-WTF yiDharma?
Okwesibili. Esikhundleni sokuthi "ngikucasule" bese ngiphonsa intukuthelo yentombazanyana engenamqondo, ngikubonge onakho futhi uzophenya ukuthi ungayifaka kanjani i-Dharma ebabayo - noma ngabe iyini - endaweni yesikhulumi / ekusabalaliseni oyisebenzisayo futhi uyenze ifinyeleleke kwabanye abasebenzisi, NJENGOBA BENZA Abanye abasebenzisi nge-SOFTWARE OTHOLA UKWENZA I-PULP FUTHI UKULUNGELE UKUDLULA.
Awunawo umbono wokuthi uzokhuluma ngani, uke wazama ukusebenzisa iWindows 95?
IDharma ngumdwebo omusha weChakra ofaka uhlobo olusha lweCaledonia (ingqikithi ye-plasma) netimu ye-KDM neKsplash kanye nohlelo lombala.
Uma bethanda iDharma kakhulu bangafaka konke okuqambe kumakhosombe ngokwabo noma ku-KDE-Look.org.
Akuyona inkinga enkulu.
abakwazi. I-Dharma ayikwazi ukufakwa kusuka ku-KDE Bheka. Umbhali uthe wayiklama ngqo iChakra futhi iza neChakra kuphela.
Ngakho-ke kunzima njengokufaka i-Chakra (ngokwesibonelo ku-MV) futhi 'ususe' izingxenye ezisithandayo.
Ngemuva kwakho konke iGNU + Linux yiFrankenstein yezinhlelo ezisebenzayo, noma cha!?
Sihamba ngezingxenye, impikiswano yokuhlukaniswa iphawulwe izikhathi eziyinkulungwane, nangaphezulu kwezizathu ezinhle zokuhlukaniswa: ngoba ithuthukisa ukuncintisana (ngakho-ke ikhiqiza ukuthuthuka), ngoba ivumela ukuba nezinketho ezahlukahlukene, njll., Ukubuyela emuva okuyinhloko ( uma kungabizwa kanjalo, ngoba empeleni akuyona into embi) ukuthi awukwazi ukuphoqa umuntu owenza lokhu ngentando yakhe futhi ngoba ukuthola kukuthakazelisa ukusebenza kokuthile angakufuni, okulula.
Ngokuphathelene, i-AUR iyindawo yokugcina yabasebenzisi futhi izokhawulelwa, yize ngicabanga ukuthi abanye abasebenzisi sebevele balayishe lolu hlobo lwento lapho) kepha kungenxa yokuthi zonke izinto ezakhiwa noma iyiphi iphrojekhthi noma isoftware yamahhala, ungazilanda ikhodi yomthombo bese uyihlanganisa ngokwakho, ngendlela efanayo neDharma, Malcer amalayisense imisebenzi yakhe neCC kanye ne-caledonia kanye netimu ye-grub, ingqikithi ye-KDM ne-Ksplash ingalandwa futhi ifakwe. Futhi ekugcineni ngikukhumbuze ukuthi yize iChakra yavela e-Arch, manje seyizabelo ezimbili ezihluke kakhulu, ngakho-ke lezi zingosi ezimbili okufanele zigcinwe azisebenzi.
Ngiyakutshela ukuthi uMalcer (umdali weDharma) akafuni ukuthi umsebenzi wakhe uguqulwe, ngakho-ke wawubeka ngaphansi kwelayisense Ilayisense ye-Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 okuvumela ukukudalula, ngoba ithi:
- Abelana: ukukopisha, ukusabalalisa kanye nokuxhumana obala ngomsebenzi.
- Yenza ukuhweba umsebenzi
Ngaphansi kwale mibandela elandelayo:
- Ukwamukelwa: Kufanele uvume amakhredithi womsebenzi ngendlela eshiwo ngumlobi noma umnikazi welayisense (kodwa hhayi ngendlela ephakamisa ukuthi unokuvunyelwa kwabo noma usekela ukusetshenziswa komsebenzi).
- Ayikho imisebenzi ethathwe kokunye - Lo msebenzi awukwazi ukuguqulwa, uguqulwe noma unwetshwe.
Njengoba umngane waseSpain angasho ukuthi: Thinta amaqanda akho .. Okokuqala, angiqondi ukuthi umsebenzi wenziwe kanjani nge-Free Desktop Environment, nokuthi isebenza kwi-GNU / Linux Distribution inelayisense enjalo. Kepha ekugcineni, kufanele uhloniphe umsebenzi wabanye ..
Ayikho indlela yokuthola iDharma uma ungasebenzisi i-Chakra, yize njengenjwayelo, akukho okungenzeki kule mpilo. Engikwenzile bekuwukufuna amaphakheji asezinqolobaneni zeChakra, ukuwalanda, ukuwavula uziphu, nokuwafaka ezindaweni zawo. Uma unentshisekelo yokuyilanda:
I-Chakra ayibonakali imbi kimi, yi-distro yokubheja ku-KDE, ngokungathí sina, hhayi ngokushaya i-Kubuntu, i-Netrunner, i-fedora ne-KDE noma i-X distro ne-KDE, ngaphandle kwe-Gentoo, ngemuva kokuthi bonke abanye basebenzise i-gtk ne-qt, i-Chakra inayo Okucacile ukuthi wonke amaphakheji ahlanganiswe ngaphandle kokuxhaswa kwe-gtk ne-gnome, lokhu kubenza babe lula uma kuqhathaniswa namanye ama-distros futhi kungaphazamisi uhlelo ngokuncika kwe-gtk, kunengqondo ukuthi bane-CCR ngoba ku-AUR izinto ezikhona azilawuli lokho Amaphakeji alayishwayo awanayo i-gtk ne-gnome ngoba i-Arch ayiboshelwe endaweni eyodwa yedeskithophu, ngakho-ke angiboni kabi okwenziwa yi-chakra, bafeza izinto ezithakazelisa kakhulu njenge-networkmanager ne-libreoffice ebaphuce konke ukuncika kwe-gtk .. manje kuningi abazama ukukunika kanzima ku- «system-printer-config» ukususa konke ukuncika kwe-gtk
Uyazi nganoma yikuphi ukulungiswa kwe-Chakra noma ukufaka ngemuva? Ngisanda kuqala ukuhlola le distro futhi ngithole i-wiki yayo ilusizo kakhulu, kepha ngimusha kakhulu ekusatshalalisweni kwe-KDE.
P.S. Ngithole kule ndawo enhle into efana nalokhu ebengikubuza, ekungeneni kwePerseus, okuvela ezinyangeni eziningi ezedlule, ngicabanga ukuthi isekhona namanje, akunjalo?
Ngokuvamile ngingasho ukuthi kuningi osekuvele kwenzekile ngaphansi komfula, ngokwesibonelo: iphakethe le-chakra-essentials selivele laphela, i-ccr manje iza ngokuzenzakalela, izinkomishi nokulungiswa kokuphrinta (kufaka phakathi i-hplip) futhi, azikho izinto eziningi okudingeka ukuthi uyilungiselele ngokufaka i-chakra ehlanzekile ngaphandle kwezilungiselelo zefonti.
Sengivele ngifuna ukubona umphathi wephakeji eseqedile, ngoba kusamele ngihlanganise noma ngisebenzise amaphakheji we-arch ku-Chakra njenge-ubuntuone
Ngenxa yezinkinga ngomsebenzi wami, bekufanele ngibuyele kuWindows ngoba akukho lutho lwalokho
Ngenze ngeLibreOffice kungisebenzele kahle lapho kusetshenziswa umshini ongewona owe-Linux
futhi angikwazanga ukuthola ezinye izinhlelo zeLinux ezenze imisebenzi yami yaba lula
Nginikeza izingqungquthela, ama-workshops, izifundo futhi awukwazi ukucabanga ukuthi kubiza ini nini
amafayela wami abeprintiwe noma afakwa kumshini ongewona we-Linux amanye
isethulo, nganginethezekile noKubuntu, (kepha uma ngingasebenzi ngeke ngisinde),
bese ubeka i-W7 ...; ngakho-ke shiya ukwahlukanisa ukuze uvivinye i-chakra kodwa
manje ngithola (futhi ngiyayibona ngama-distros amaningi) iziphequluli ezingazenzi
sebenza kahle ngekernel ngaphezulu kwe-3.5.7.2
Lonke uhlelo lusebenza kahle ngaphandle kwe-Opera esimweni seChakra, kusukela
Yize isiphequluli sivula futhi singikhombisa amakhasi, asihambi phakathi kwamamenyu amancane,
Ihlala izula futhi iyangitshela: Ayikwazi ukuxhuma kuseva.
Ngisebenzisa i-Opera Sync futhi ayingivumelanisi, ihlala ithi iseva
ayiphenduli, kepha uma ngibuyela ku-kernel engezansi kwe-3.5.7.2 ziyasebenza
Yini engingayenza ukuze iChakra-Benz elethwe i-kernel 3.7.6.2 ukulungisa lokho
Ngiyehluleka futhi ngiyakwazi ukubona ama-imeyili namakhasi ami?
QAPHELA: Bekufanele ngivule iWindows ukuze ngibeke amazwana ngoba noRekonq
ivumela (iyayisula) futhi i-Opera ilahle leli Phutha: Izamile ukufinyelela kukheli
https://blog.desdelinux.net/wp-comments-post.php, engatholakali ku-
umzuzwana. Sicela uqinisekise ukuthi ikheli lewebhu (i-URL) lilungile
kubhaliwe, bese uzama ukulayisha kabusha ikhasi.
Lokho kwenzeka kimi kuphela uma ngisebenzisa i-kernel ephezulu kune-3.5.7.2 kungakhathalekile ukuthi isatshalaliswa kanjani, imishini iyi-Samsung RV408 ene-6GB RAM futhi akukho firewall efakiwe.
Sanibonani nonke enifunde nabeka amazwana ngalo mbhalo, nginesitatimende engisenzayo: NGINGU-IDIOT.
Emasontweni ambalwa edlule ngiqale ukufuna ukusatshalaliswa kulayini we-Arch Linux (i-distro engiyithandile cishe eminyakeni emihlanu eyedlule futhi ngiyisebenzisa kuze kube muva nje) ukwenza ukufuduka kwamakhompyutha ami uqobo.
I-Arch inginike okuningi ngesikhathi engisisebenzise ngayo kodwa izinguquko ezithile zakamuva empilweni yami zisho ukuthi yize ngingakaze ngishiye umhlaba wezokuphathwa kwezinhlelo, manje sengineminye imisebenzi engizinikele kuyo.
Ngokwesimo esinjalo futhi yize njengoba ngishilo ngizoqhubeka nokugcina amaseva ami futhi ngikwazi ukufinyelela ezinhlelweni zami namuhla angisenaso isikhathi esidingekayo sokunikela emhlanganweni wezobuciko wokusatshalaliswa kwami ​​njengoba ngangivame ukwenza ngaphambili.
Manje, ukuthuthela ekusatshalalisweni okuhlangabezana nezici engizichaza ngezansi akuyona into encane, okungenani kumuntu obebambe iqhaza elikhulu ekuphathweni kohlelo kanye nengqalasizinda ye-IT ngokujwayelekile, kungasakhulunywa ngemuva kokwazi izinqubo eziningi ze-GNU + I-Linux futhi ekugcineni uthole okuthile okuhle njenge-Arch Linux.
Ngokuyisisekelo bengifuna ukuhambisa ukusatshalaliswa kwe-OOTB ngosizo oluhle lwangaphandle, ukugoqa ukukhishwa, uma kungenzeka kususelwa ku-KDE SC (yize bekungeyona imfuneko edingekayo ngoba bengingahlala njalo ngifaka izinhlelo ozidingayo, uma uzidinga ngempela: digiKam iza engqondweni yami), ukuthi yize bekuyi-OOTB, ibingakufakile ngokuphelele konke ebingakudinga ezimpilweni eziyi-1000, ukuthi uma kungenzeka bekuyinto ejwayelekile, engenza kube lula ukufuna izixazululo zezinkinga futhi ingivumele ukuthi ngithole yonke isoftware engingayidinga futhi ukuthi, ekugcineni, kwakungeyona iLeviathan nokuthi ngaphakathi kwe-OOTB yayo yayikhanya, iguquguquka futhi ishesha ngangokunokwenzeka. Futhi lokho kuzosebenza kahle kwi-HW yelaptop yami futhi uma kungenzeka kwamanye amakhompyutha angewona awe-server.
Ngamafuphi, bengidinga ukusatshalaliswa ngalezi zici:
1.I-OOTB (Ngaphandle kwebhokisi)
2. Ukukhishwa kwe-Rolling: ngo-2013 kungumbhedo ukusebenzisa ukusatshalaliswa kolunye uhlobo kwe-GNU + Linux, kokubili kuma-desktops / laptops / workstations kanye namaseva. Endaweni yama-desktops / ama-laptops kuyisiphukuphuku ukuthi kufanele silinde izinyanga eziyi-6 noma ngaphezulu kuze kube ukusatshalaliswa kuvuselelwa ngokuzumayo futhi kusivumele ukuthi sifinyelele kuzinguqulo ezintsha zezinhlelo zokusebenza esizisebenzisa nsuku zonke lapho singabuyekeza kukho konke ukusabalalisa namapulatifomu kusho izicelo ngaphandle kwenkinga. Emkhakheni wamaseva, kuyasiza kakhulu ukuba nethuba lokukwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha nokuvuselela obukhona ukufinyelela izici ezintsha, hhayi nje amabala ezokuphepha.
3. Ukuthi ithobela, okungenani ingxenye enhle, nemigomo ebekiwe
4. Ivumelana nezimo, iyashesha, iyakhanya, lapho kungenzeka khona ngokugxila okuthile kuma-sysadmin noma okungenani i-poweusers, okuvumela ukufinyelela obuseduze kohlelo ngendlela ehlanzekile ngaphandle kokusebenzisa amathuluzi wokuzilimaza.
5. Lokho-ke kuhamba kahle kwi-laptop yami.
6. Ukusekelwa okuhle komngcele.
7. Iyasebenziseka: ukuthi ukuba yi-OOTB nokuhambisana nezidingo zabasebenzisi bokugcina ngeke kususe ukusetshenziswa kwe-distro, kungaba ngokusebenzisa "ubunzima" obungapheli, ukungabi namathuluzi ezingeni eliphansi, njll.
8. Okujwayelekile noma okungenani okunemiphakathi esebenzayo nenekhono.
9. Kusunguliwe - noma okungenani ngibe nombono ophusile ozoqhubeka nokuthuthuka isikhathi esithile futhi ongeke unyamalale ngokuzumayo ngolunye usuku ungishiya futhi nginesidingo sokuthola ukusatshalaliswa okusha.
10. Kulula ukuphatha: ngangokunokwenzeka kusuka kumakhosombe we-PPA okuthi, yize kwesinye isikhathi bangenzela ukungabi khona kwama-distros athile ukufinyelela kwisoftware ebuyekeziwe lapho kubuyekezwa uhlelo, ilotho langempela.
10. Ngesoftware nezinhlamvu ezibuyekeziwe, okungenakusho ukungazinzi.
11. Uzinze ngokuphelele, neqembu labantu abazinikele ngemuva nangamakhosombe ane-software yamanje, hhayi eyangaphambi komlando.
Namuhla ngingasho ngenjabulo ukuthi ngemuva kwezinsuku ezimbalwa ngisebenzisa iChakra (Benz) ngithole i-distro enjalo. I-Simply Chakra iyisimangaliso futhi ingasaphathwa uma umuntu engumcibisheli efuna uhlelo olungadingi ukubhekana nayo yonke imininingwane yeminithi.
I-Chakra yenza * okufana noma okungcono * kune-Arch + KDE SC. Ngesikhathi esifanayo ukuthi uhlelo olusheshayo, olunamanzi, olunazo zonke izinzuzo ze-Arch ngokulawulwa kwalo okulula, lunezinzuzo ezithile ezincane okuthi ekugcineni kosuku kube ngumhlaba ngokwawo:
a) i-kernel elungiselelwe ukusebenza ne-KDE SC - ku-Arch noma ukusatshalaliswa okufanayo i-kernel ilungiselelwe ukuthi isetshenziswe ezimweni ezahlukahlukene kakhulu, okwenza ukuthi isisho sithi "lowo ohlanganisa okuningi…" noma ngesiNgisi "Jack of all trades, master of none '.
b) I-KDE SC ipholile, ihlotshisiwe, ihlanganisiwe futhi yehliselwa emininingwaneni yayo emincane, okusho ukuthi ngokwesibonelo - ngiyazi ukuthi yimininingwane engasho lutho - eDolphin okufakiwe okuhambisana neNepomuk kunesithonjana saso esihambisanayo esikhundleni sesithonjana esijwayelekile ku-Arch Dolphin (uhlobo olufanayo lweDolphin ne-KDE SC) nokuthi bekufanele ngizinakekele.
Okungeyona imininingwane engasho lutho ukuthi kanye nentuthuko entsha yeNepomuk nayo yonke ingqalasizinda ye-KDE kule nguqulo entsha 4.10, isandla se-Chakra devs kusobala ukuthi sinikela ngohlelo olukhanyayo, olusheshayo nolunakho konke Izici zedeskithophu zenziwe zasebenza - ngisho nomshini wami ubanda ngokuphelele ngemuva kwamahora wokusebenzisa i-Chakra ngezinhlelo ezimbalwa ezivulekile!
c) Njengoba iChakra ingukusatshalaliswa okuhlanganisiwe, angizange ngidinge ukufaka i-acpi, i-acpid noma i-laptop-mode-tools ukuthola okuningi ohlelweni. Eqinisweni, ekufakweni kokuqala engikwenze kuChakra nokuthi ngangivivinya ubuchwepheshe nezindlela engizisebenzise ku-Arch Linux, ngabona ukuthi yize ku-Arch -namanye amasistimu amaningi- kuyasiza ukuwasebenzisa eChakra hhayi kuphela ukuthi ayengadingekile kepha ayengakhi . I-Chakra isatshalaliswa lapho kucatshangwa khona konke futhi lokho kuyigugu ngoba thina, njengabasebenzisi bokugcina, sinakekela ukujabulela ukusetshenziswa komshini.
Noma kunjalo, ngenxa yezizathu engizichazile ngenhla, kusenzima kimi ukuthi ngisebenzise Ubuntu noma iLinux Mint (okungcono i-KDE), ukwabiwa engikuthanda kakhulu naphezu kwefa labo le-Debian: usuku u-Ubuntu oluqala ukukhishwa ngizohlola isidingo sami okwamanje ukuthuthela noma ukungangeni kuleyo ndawo yesikhulumi ngaphezu kwanoma yini ukuhlanganisa ukusetshenziswa kwezinhlelo ngoba amaseva wami amasha asebenzisa yonke i-Ubuntu Server - ngigcina endala nge-Arch.
Ubuntu Server bekungukusatshalaliswa kwamaseva abenobunzima bokuthola umhlaba kepha namuhla kuhle kakhulu, izinkinga ebekade enazo kudala zisemuva kwethu futhi namhlanje kuningi angakunikeza.
Ngiphinde ngazama inguqulo yakamuva ye-OpenSUSE, 12.3 RC2, kepha ngisathola ukuthi yize ngifisa ukuyibeka, kuseseyi-mammoth distro engiyithandayo futhi egxile kakhulu ekusetshenzisweni kwe-IT / kwebhizinisi, ikakhulukazi kulabo okufanele babhekane nabo ngamanethiwekhi ahlanganisiwe nemishini ye-Windows.
IFedora iyindawo yokudlala yobuchwepheshe obusha obunokusekelwa okulinganiselwe phakathi kwezinhlelo zezinyanga eziyi-18 futhi enesimo sengqondo esifanayo maqondana nesoftware entsha nezinhlamvu njenge-Ubuntu ngakho-ke kwehliswe ngokuphelele.
UMageia: Angikaze ngisebenzise iMandriva ngale kokubukeka kwe-distro hopper ngezikhathi ezithile futhi kulokhu ebengikufunda kusayithi lakho akuyona neze i-distro yomuntu oqonde emthanjeni we-sysadmin.
Abanye ngokuqinisekile manje bacabanga ngezinye izindlela eziqonde ngqo ze-Arch ezifana neCinnarch, ArchMint, ArchBang noma iManjaro phakathi kwabanye: iqiniso ukuthi abahlangabezani nezidingo zami. I-ArchBang i-Arch iphucuziwe futhi i-tweaked kepha isadinga umsebenzisi ukuthi ayinake, hhayi i-OOTB distro yabasebenzisi bokugcina (ebengizifunela kona!) Kepha kunalokho i-distro yama-sysadmins nabaphehli bamandla abanobuvila abafuna ukufakwa i-Arch Linux futhi phezulu futhi isebenza ngokushesha.
I-ArchMint imane isencane kakhulu futhi ibuye isebenzise i-MATE - yize ngithande kakhulu i-GNOME2 namuhla lolu hlobo lwama-desktops 'we-retro' alukho embuzweni.
Ngithande iCinnarch yize inemininingwane ethile ekhombisa ukuthi isadinga umsebenzi omncane - hhayi obucayi, empeleni umqambi omkhulu weCinnarch waba ngumsebenzisi othenjiwe we-Arch Linux esikhathini esifushane esedlule esihle nje.
IManjaro Linux Cinnamon ikhombise ukusebenza okuhle futhi empeleni ngiyifakile komunye wemishini yami yize inekusasa elincane: I-Chakra iyeza!
IManjaro Linux isendleleni eya ekusatshalalisweni okukhulu kepha-ke, kusesekude nokuba yilokho okuyiChakra. Ngaphezu kwalokho, inguqulo ye-KDE SC yeManjaro iyindawo yomphakathi, eChakra ideskithophu ye-KDE SC ingumamukeli wolahleko wakho konke ukutotosa 🙂
Ukunquma ukuthi iyiphi i-distro engizoyamukela ngesikhathi esizayo kwakungelula ngize nginqume ukuzama i-Benz.
Ngiyavuma ukuthi iChakra ayikaze ibe phakathi kwama-distros engiwathandayo kude nayo, kunalokho okuphambene nalokho: noma nini lapho ngiyizama ngithola amaphutha kusifaki, isipiliyoni sokusetshenziswa okunzima, i-bloatware emsulwa ngakho ukumangala kwami ​​kwakukukhulu lapho ngithola ukuthi kuhle kangakanani. IBenz ibikuMV futhi ingasaphathwa lapho nginqume ukuyifaka ekusatshalalisweni kwami ​​kwakudala, isimanga sangempela.
Uma ningabacibisheli futhi nithanda i-KDE SC futhi niphupha nge-Arch eyakhelwe ngokukhethekile i-KDE ne-KDE etotoswe ngokukhethekile futhi ihlanganiswe ne-Arch, uma nifuna ukuzikhipha ekuphathweni komuntu siqu kwemininingwane ngayinye yohlelo ngaphandle kokwehluleka ukulawula ilungile futhi iyimbudumbudu kuyo ngesikhathi esidingekayo-empeleni ukuvuselelwa kusenziwa kusuka kukhonsoli, ayikho into efana nomphathi wephakeji (ngaphandle kokuthi kunemiphetho eminingi ye-pacman) emangalisa nje futhi lisho okuningi kubathuthukisi balo- uma befuna uhlelo lokugcina olufakiwe lube nezici ezifanayo ne-Arch yakudala ngokukhanya, ukuguquguquka, ukushesha, ubuhle, ukunwebeka futhi, uma nabo bebazisa ubuhle nento yobuciko kuhambisana nomsebenzi omuhle kakhulu wobuchwepheshe ngakho-ke kungenzeka ukuthi iChakra nakanjani yi-distro ababeyifuna.
Angifuni ukuvala la mazwana ngaphandle kokusho okuthile kwe- * substance * okunikezwa yiChakra maqondana nokunye ukwabiwa ngokwesigaba sayo sobuciko: ukusatshalaliswa kuhle noma ngabe yikuphi lapho ubheka khona. Endabeni yami ngithanda izingqikithi ezicacile ngakho-ke ngisebenzisa iDharma ngezinguquko ezithile: i-OS eyisisekelo (amawindi, isethi yewijethi ye-QtCurve nemibala), uShere Khan wesikhombisi segundane ku-X (imbobo yesikhombisi segundane le-MacOS nebhola lolwandle nakho konke) neHelium yePlasma. Imidwebo kaChakra imane nje inhle futhi inegalelo ekunikezeni i-aura ekhethekile kwi-distro nokuthi ayibukeki nje injalo, ukusatshalaliswa kwe-GNU + Linux (angisho ukuthi kukhulunywa ngokuhlekisa, impilo yami yonke ngisebenzise i-graphic boot e-Arch futhi ngaqala isikhathi sami se-X kusuka kulayini wokuyala) kepha uhlelo lokusebenza olusondele kakhulu ku-MacOS noma iWindows ngokuhlanganiswa kwalo kepha ngazo zonke izimfanelo ezinganikezwa yi-GNU + Linux kuphela.
Ekugcineni: kulula kakhulu ukutolika kabi i-Chakra uma ingasetshenziswa (enginakho) kepha kubalulekile ukuthi kucace ukuthi iChakra iyi-distro eyenzelwe abasebenzisi bamandla kanye nabaphathi bohlelo 'abathathe umhlalaphansi' abafuna uhlelo oluqinile, lwesimanje, inamandla, iyashesha, iyaguquguquka futhi ishesha lapho yonke into isebenza ngendlela efanelekile.
Ubufakazi balokhu ukuthi eChakra, ngokungafani nawo wonke amanye (cishe) wonke ama-distros asebenzisa i-systemd banqume ukusebenzisa uhlelo olusha lokuqamba ama-network interface kusukela ekuqaleni esikhundleni sokuqhubeka nokuzifihla - ngokwesibonelo ibhodi lami lomama inethiwekhi ayisekho i-eth0 kepha i-enp3s0 ngokuya ngemihlangano emisha yokuqanjwa kwamagama ngokufanele kwenethiwekhi.
Futhi ngaphandle kokuthi i-KDE 4.10 yenze ushintsho ku-udisks2 eChakra bagcina ukusetshenziswa kwezidiski ngenxa yokuhlehla nokusebenza okuphansi okuvezwa yi-udisks2.
Yonke le mininingwane isiza ukukhombisa ukuthi ngemuva kweChakra kuneqembu elinomqondo omningi, elicabanga kahle ngaphambi kokwenza isinqumo ngasinye nokuthi ungalubona ngempela uthando abalufaka kuma-distros lokuthi lusebenza kanjani kahle.
Ukube bengingathola ukufakwa kwami ​​kwe-KDE SC 4.10 nge-kernel 3.7.6 kuchichima ngokuphelele, bengizosola ukuthi ngibhekene nohlelo lwe-Arch Linux noma lwe-Gentoo ngenxa yokuthi konke kushesha futhi kuketshezi kusebenza kanjani.
Kusamele ngiphawule ngesistimu ye-sandboxing abayisebenzisela izinyanda zohlelo lokusebenza ezingezona ze-Qt kanye nezici eziningi zokusebenza kweChakra, kepha umqondo wami lapho ngiqala ukubhala kwakungukubeka amazwana hhayi iposi lonke 😛
I-Arch inhle kakhulu kodwa eChakra ngine-Arch + KDE engingayifinyelela uma nginesikhathi sokuzinikela kuyo. Futhi njengoba kunabantu abaningi abakhombisa ukuthi bayakwazi abakwenzayo, kungani ukuchitha isikhathi kuvuselela isondo? I-Chakra Benz iyigugu elincane kakhulu elibonwayo.
Ngiyabingelela futhi qhubeka uzame uZakra: mhlawumbe ulahlekelwa 'ukudlidliza' kwe-Arch futhi amanye amaphakheji ahlelwe ngaphambilini noma ama-AUR (afana ne-vcp) kanye nalawo mathuluzi ahloselwe ama-sysadmins kepha uzothola uhlelo lokusebenza lwe-AWESOME ukwengeza isoftware ku bafuna kungasho lutho, kakhulu uma bevela ekusebenziseni i-Arch.
La mazwana ngicabanga ukuthi abengawesihloko esisha. Noma kunjalo, usitshela ukuthi uhlupheke ngokomzwelo ufuna i-Arch-like distro ephelele, ezinzile futhi i-Out the Box.
UFedora usekela iminyaka emibili? Unikeza owodwa kuphela, ngibuze emphakathini, ngifunde ku-wikipedia ... Imibhalo ithi ukukhishwa kwangaphambilini kusekelwa kuphela kuze kube yinyanga yokuqala yalena yamanje.
Ungangitsheli ukuthi i-trival, uma nge-Debian amanye ama-.debs engahlangabezani nokuncika, kepha kuze kube manje ngenza kahle kakhulu ngokuhlanganiswa.
Phendula ku-lawliet @ debian
I-LibreOffice 4.0 namandla weBranding (Amaqiniso Afihliwe Phakathi Kwe-OpenOffice neLibreOffice)
I-Debian 7 Yini entsha endala?